Kanal İstanbul EIA အစီရင်ခံစာအတွက်အတည်ပြုခဲ့သည် RayHaber | raillynews
[21 / 02 / 2020] Artificial Intelligence ကို National Combat Aircraft Project တွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်	06 တူရကီ
[21 / 02 / 2020] Afyonkarahisar ရထားဘူတာတွင်ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း	03 Afyonkarahisar
[21 / 02 / 2020] KONYARAY ရထားလိုင်းအတွက်လက်မှတ်ထိုးသည် .. ! ဒီတော့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်	42 Konya
[21 / 02 / 2020] Sabiha Gökçenရှိလေယာဉ်မတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၀ န်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ချက်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Kanal İstanbul EIA အစီရင်ခံစာအတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်
17 / 01 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်း ၀ န်ကြီး Murat Kurum မှပြောကြားရာတွင်၎င်းတို့သည် Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ EIA လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကန့်ကွက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခဲ့ပြီးယနေ့အထိ EIA အစီရင်ခံစာကိုအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အာဏာပိုင်များက Channel Istanbul စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများနှင့် ၀ န်ကြီးဌာနအဆောက်အအုံ၏အစီအစဉ်များအားဖြေကြားခဲ့သည်။
Kanal Istanbul သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်အတူသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
၎င်းသည်ရာစုနှစ်စီမံကိန်းဖြစ်သော Bosphorus၊ Bosphorus အားကာကွယ်ရန်နှင့်ကယ်တင်ရန်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ EIA လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ကြီးဌာနမှဆောင်ရွက်ပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ န်ကြီးဌာနမတိုင်မီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Bosphorus ၏လွတ်လပ်မှုစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစ္စတန်ဘူလ်၏ယဉ်ကျေးမှုစီမံကိန်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ Canal Istanbul စီမံကိန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် smart city application များကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးမြို့ပြပုံစံကိုပြသပါမည်။ မြို့ပြပုံစံကိုပြသပါမည်။ ယနေ့ EIA လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အကဲဖြတ်ခြင်းများ၊ ကန့်ကွက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ EIA အစီရင်ခံစာကိုယနေ့အတည်ပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁ / ၁၀၀၀၀၀ စကေးအစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးဖြစ်သည်။ စကေး ၅၀၀၀ နှင့် ၁၀၀၀ အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဇုန်စီမံကိန်းများရေးဆွဲနေသည်။ ကျွန်တော်တို့ ၄-၅ လမှာပြီးအောင်လုပ်ပြီးလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Kurum ကျွန်ုပ်တို့သမ္မတ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင် Channel Istanbul စီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့လိုချင်ကြတာပါ၊ သူကဒီစီမံကိန်းကိုအရှုံးမပေးခဲ့ဘူး။ ငါတို့ယခုအချိန်အထိလုပ်ခဲ့သောစီမံကိန်းတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လူများနှင့်ပြုမူဆက်ဆံခြင်း၊ ငါတို့လူများနှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ ၈၂ သန်းသောနိုင်ငံသားများ၏အနာဂတ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဤစီမံကိန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒအတိုင်းဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ”
WEZ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေယာသိမ်းဆည်းရန် INA ကိုခွင့်မပြုပါ
Kanal Istanbul စီမံကိန်းတွင်မြေယာပြောင်းလဲခြင်းကိုရည်ညွှန်း။ ခေါင်းစဉ်သည်လုပ်ရပ်များပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နီးကပ်စွာလိုက်နာသည်။ Bakan ကျွန်ုပ်တို့သည် Kanal Istanbul စီမံကိန်းသို့မဟုတ်မည်သည့်စီမံကိန်းတွင်မဆိုမြေငှားရမ်းခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ ယခင်စီမံကိန်းများအားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း Channel Istanbul စီမံကိန်းတွင်မြေငှားရမ်းခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာငါတို့သိမ်းယူလိမ့်မယ်
Murat Kurum မှပြောကြားသည်မှာနိုင်ငံခြားသားများပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများလည်းရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ arsa ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံခြားသားများနှင့်ပုဂ္ဂလိကနှင့်တရား ၀ င်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိသောမြေသည်စတုရန်းမီတာ ၆၀၀၀၀၀ ရှိသည်။ ၎င်းသည် ၂၆၅၀၀ ဟက်တာဖြစ်သောစတုရန်းမီတာ ၂၆၅ သန်းဖြစ်သော Canal Istanbul စီမံကိန်းတွင်အလွန်နိမ့်သောနှုန်းဖြစ်သည်။ ”
အာဏာပိုင်များကစီမံကိန်းမှရေအရင်းအမြစ်များ၊ သဘာဝသယံဇာတများနှင့်ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်များကိုလည်းတင်ပြခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အစီရင်ခံစာများမှတ်တမ်းတင်။
အာဏာပိုင်များက EIA အစီရင်ခံစာတွင်တစ်ချက်ချင်းစီပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Ede စီမံကိန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းဤအစီအမံများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်စီမံကိန်း၏အဆုံးတွင်, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုကို Bosphorus တွင်နေထိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများ၏အသက်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံမှုအန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်မြို့ပြတည်ဆောက်ပုံ၊ အလျားလိုက်ဗိသုကာအခြေခံအရငလျင်လှုပ်ခြင်းများကိုငလျင်လှုပ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥယျာဉ်များ၊ ဂေဟဗေဒစင်္ကြံများ၊ နိုင်ငံသား ၇ ရက် ၂၄ နာရီ၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ဆိပ်ကမ်းများ။ ကျနော်တို့ကဒီမှာကျူးလွန်ကျနော်တို့မြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝကာကွယ်ပေးရန်တိုင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ဖို့မယ့်အသီးအသီးခြေလှမ်းကိုယူသည့်အခါဤစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်, ရှိသမျှİstanbul'umuzdaတိုင်းစီမံကိန်းတွင်အဖြစ်ကျနော်တို့အစောပိုင်းကထိုသို့ပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတပြင်လုံးတူရကီ, ကြောင့်ပါပဲသေချာ WE ။ "
လူမှုရေးအိမ်ရာစီမံကိန်း ၁၀၀၀၀၀ တွင်လျှောက်လွှာနံပါတ်များနှင့်ပတ်သတ်သောမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရာတွင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့က“ လူနေအိမ်ရာစီမံကိန်း ၁၀၀၀၀၀ အတွက်လျှောက်လွှာပေါင်းတစ်သန်း ၂၀၉၀၀၀ ရှိခဲ့သည်။ လူမှုရေးအိမ်ရာ ၁၀၀၀၀ ၏ပထမ ၃ လအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းများကိုပြီးအောင်တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းဖြင့်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၀၀၀၀၀ လူမှုရေးအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
အဆိုပါအာဏာပိုင် 100 လူမှုရေးအိမ်ရာများအတွက်လျှောက်လွှာအတွက်ပြည်နယ်များနှင့်ပတ်သက်။ ကြေညာချက်လုပ်။ , လျှောက်လွှာ၏အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်ကအတူပြည်နယ်များ, Istanbul အတွက် 375 တထောင် applications များ, Izmir အတွက် 75 applications များနှင့် Bursa အတွက် 56 applications များခဲ့ကြသည် ler ကပြောသည်အခြားပြည်နယ်များအတွက်လျှောက်လွှာအရေအတွက်ကောင်းစွာခွဲတမ်းအထက်ဖြစ်ပါတယ်။ ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အလားတူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစီမံကိန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်ငွေနိမ့်သောနိုင်ငံသားအားလုံး၏အိမ်ရှင်များဖြစ်လာစေမည့်နည်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ဒီစီမံကိန်းရဲ့နိုင်ငံသားတွေမပါ ၀ င်ဘဲဒီတိုင်းပြည်မှာကျန်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟုသူကပြောသည်။
ဤစီမံကိန်းတွင်ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့နိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သည့်ခိုင်မာ။ လုံခြုံသောအိမ်များဆောက်လုပ်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်မှာအာဏာပိုင်များက“ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတော်ဥယျာဉ်များ၊ လူမှုရေးအိမ်ရာနှင့်မြို့ပြအသွင်ပြောင်းမှုများမှများစွာခြေလှမ်းများလှမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ polemics နှင့်အတူဖြုန်းဖို့အချိန်မရှိကြပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၂၃ ရည်မှန်းချက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာရှေ့သို့တိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်
နိုင်ငံသားများက 'Ya Kanal Or Istanbul' ကို Kanal Istanbul EIA အစီရင်ခံစာသို့ပြောကြားသည်
နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တစ်နှစ်တာ 2018 ခွင့်ပြုချက်
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သို့ဝေမျှမယ်လွှဲပြောင်း Output ၏ခွင့်ပြုချက်
Trabzon နှင့် Bayburtt4စုစုပေါင်းရထားလမ်းအစီရင်ခံစာမှအယူခံဆီသို့ရောက် လာ. ,
TCDD ဆုံးရှုံးမှု TCA အစီရင်ခံစာအရ
တရားရုံးများ၏ငွေစာရင်းအစီရင်ခံစာအရŞanlıurfa Trambus စီမံကိန်းသည်ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်နေသည်
Alanya စီးတီးကောင်စီအတည်ပြုချက် Output ကနေတစ်ဦးကကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို
အပျိုကညာမာရိသညျ Ropeway Project မှအတည်ပြုချက်ဝန်ကြီးဌာနထံမှ output
Sivas Ropeway Project မှ Output အတည်ပြုချက်
စည်းဝေးပွဲ Project မှရလဒျ၏ခွင့်ပြုချက်မှ Tunektepe
တတိယအထပ်က output လေဆိပ်စစ်ဆေးစေပါလိမ့်မည်
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ် EIA ကိုအစီရင်ခံစာ
Channel Istanbul EIA အစီရင်ခံစာအတွက်အတည်ပြုချက်
ဘယ်လို Channel ကို Istanbul တင်ဒါဖြစ်လိမ့်မည်
Artificial Intelligence ကို National Combat Aircraft Project တွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်
BMW İstanbulတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်